भारतमा संक्रमणको दर ओरालो लाग्यो,४१ दिन यताकै कम संक्रमित भेटीए - clickpati.com
May 25, 2021 ashishLeaveaComment on भारतमा संक्रमणको दर ओरालो लाग्यो,४१ दिन यताकै कम संक्रमित भेटीए
भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का १ लाख ९६ हजारभन्दा धेरै नयाँ संक्रमित थपिएका छन् ।
भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार भारतमा गत अप्रिल १४ यता पहिलोपटक दैनिक नयाँ संक्रमितको संख्या २ लाखभन्दा कममा झरेको हो ।
पछिल्लो समय भारतमा कोरोनाका नयाँ संक्रमितको संख्यामा निरन्तरको कमी देखिएको छ । यद्यपि अन्य मुलुकको तुलनामा भने भारतमा कोरोना संक्रमण उच्च छ । भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना संक्रमणको कारण ३ हजार ५११ जनाको मृ,त्यु भएको छ ।
यससँगै भारतमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको समग्र संख्या २ करोड ६९ लाख नाघेको छ भने कोरोनाबाट मृ,त्यु हुनेको संख्या तीन लाख ७ हजार २३१ पुगेको छ । भारतमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि २५ लाख ८६ हजारमा झरेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा भारतको तामिलनाडुमा ३४ हजारभन्दा धेरै नयाँ संक्रमित पाइएका छन् भने कर्नाटकमा नयाँ संक्रमितको संख्या २५ हजारभन्दा धेरै छ । त्यस्तै उक्त अवधिमा महाराष्ट्रमा कोरोनाका नयाँ संक्रमितको संख्या २२ हजारभन्दा धेरै छ ।
भारतमा अहिलेसम्म १९ करोड ८५ लाख डोजभन्दा धेरै कोरोना खोप मानिसहरुलाई लगाइसकिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस : काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमण घट्दो, बाहिर बढ्दो
काठमाडौं । दैनिक थपिने कोरोना संक्रमितको संख्या काठमाडौं उपत्यकामा घट्दै गर्दा बाहिर भनेको बढेको छ ।
जेठ पहिलो साताको तथ्यांकले उपत्यकामा संक्रमण दर क्रमशः घट्दै गएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्ण पौडेलले बताए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार जेठ १ गते काठमाडौं उपत्यकामा २८८२ जनामा संक्रमण देखिएको छ भने साताको अन्तिम दिन जेठ ७ गते २४४७ जनामा संक्रमण देखिएको छ । संख्यात्मक हिसाबले तुलना गर्ने हो भने जेठ ३ र ६ गतेबाहेक काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमण घटेको देखाउँछ । तथ्यांक अनुसार जेठ ३ गते ३२१३ र ३२३२ संक्रमित थपिएका छन् ।
उपत्यका भन्दा बाहिरका जिल्लामा भने संक्रमण बढ्दो छ । उपत्यका बाहिर संक्रमण बढ्नुले गाउँगाउँमा संक्रमण फैलिरहेको अवस्थालाई देखाउने डा. पौडेल बताउँछन् ।
कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको सबैभन्दा अप्ठ्यारा साता चैत महिनाको अन्तिम सातायता देखिएको उनले बताए । ‘यी दिनहरुमा द्रुत दरमा संक्रमण बढेको देखिन्छ,’ डा. पौडेलले भने, ‘हाम्रो उपचारात्मक प्रणाली विशेष गरी अस्पतालहरु, अस्पतालका शय्याहरु, अक्सिजन, आईसीयू र भेन्टिलेटरका लागि ठूलो माग रह्यो ।’
यो समयमा दैनिक पहिचान हुने नयाँ संक्रमितको संख्या ९ हजारभन्दा बढी थियो । जेठको पहिलो साता थोरै मात्रामा परीक्षण बढ्दा पनि दैनिक ८ हजारको हाराहारीमा संक्रमण भेटिएका छन् । आइतबार भने ७ हजार ९१४ संक्रमित भेटिए ।
डा. पौडेलका अनुसार दोस्रो लहरमा युवा उमेर समूहका व्यक्तिहरु संख्यात्मक रुपमा बढी प्रभावित भएका छन् । संक्रमण भएका मध्ये धेरैलाई अक्सिजन दिएर अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्दा उपचार प्रणालीलाई थेग्न हम्मेहम्मे परेको उनले बताए ।
मृ,त्युलाई तुलना गर्दा पनि यो लहरमा पनि ६० वर्ष भन्दा कम उमेर समूहका व्यक्तिहरुको बढी मृ,त्यु भएको उनले बताए ।
सबैभन्दा बढी प्रभावित काठमाडौं
गत साताको तथ्यांकलाई हेर्दा सबैभन्दा बढी प्रभावित काठमाडौं जिल्ला रहेको छ । काठमाडौमा ६८ हजार ९२६ जना संक्रमित भेटिँदा रुपन्देहीमा १४ हजार ८२७ संक्रमण पुष्टि भएका छन् ।
ललितपुरमा १२९०३, बाँकेमा ११०९६, भक्तपुरमा ८१६३, मोरङमा ७९५७, कास्कीमा ७५२७, कैलालीमा ६५४५, दाङमा ६०८४ र चितवनमा ५१११ संक्रमित पुष्टि भएका छन् ।
प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एकलाख एन्टिजेन
सरकारले कोरोना परीक्षणका लागि सबै प्रदेशमा कम्तीमा एकलाख एन्टिजेन पठाउने भएको छ ।
डा. पौडेलका अनुसार प्रदेश १ मा एकलाख, प्रदेश २ मा दुई लाख, बागमती प्रदेशमा एकलाख, काठमाडौंमा थप एकला, भक्तपुर र ललितपुरमा ५०/५० हजार, लुम्बिनी प्रदेशमा दुई लाख, गण्डकी प्रदेशमा डेढ लाख, कर्णाली प्रदेशमा एकलाख ५० हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई लाख एन्टिजेन पठाइने छ ।
एन्टिजेनको सही सदुपयोग र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ लगायतका आवश्यक पर्ने स्थानहरुमा सम्बन्धित प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालय, मेडिकल स्टार, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले स्थानीय तहको समन्वयमा टोलटोलमा समयमै एन्टिजेन परीक्षण गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।
May 28, 2021 ashish